Puntland oo digniin ka soo saartay hubka sharci darada ee lagu dhex wato magaalooyinka – idalenews.com
Puntland oo digniin ka soo saartay hubka sharci darada ee lagu dhex wato magaalooyinka
Wasiirka Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa ka digay hubka sharci darada ee lagu wato magaalada, isagoo ka hadlay xaalada amaan ee deegaanada Puntland, kadib markii todobaadkan lagu dilay Boosaaso nabadoon caan ahaa.
Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay inay jiraan dad rabshado wada oo abaabulaya banaan baxyo, isagoo soo qaatay banaan bax shalay ka dhacay Boosaaso iyo Qardho, kaasoo uu xusay in lagu qal qal gelinayo ammaanka Puntland.
“Ma garaneyno waxa ujeedkooda yahay kuwa rabshadaha ka wada Boosaaso iyo Qardho, waxaan u sheegeyna inay joojiyaan qal qalka”ayuu yiri Wasiirka Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ciidamo hubeysan oo aan sharciyeysneyn, kuwaasoo guryaha ilaaliya iyo hey’adaha, waxaana uu ugu baaqay inay isa soo diiwaan geliyaan.
Sidoo kale waxaa uu ku wargeliyay gawaarida muraayadaha madow leh inay ka fujiyaan dadka wata, kaasoo uu xusay inay ku dhuuman karaan kooxaha carqadala wada.
Maamulka Puntland ee uu hogaamiyo C/raxmaan Faroole ayaa bishii Janaayo muddo kororsi sameystay, iyadoo siyaasiyiinta Puntland ay ka soo horjeesteen, waxaana magaalooyinka qaar ee Puntland ka jira mucaarado looga soo horjeedo maamulka Faroole.
Wiil mucjiso ah oo aan laheyn San iyo Af oo xalay ku dhashay Isbitaalka SOS ee Muqdisho